Mogadishu Journal » Al-shabaab oo sheegtay in ay dileen taliyihii ciidamada Howlgalada Puntland
Mjournal :-Qarax jidgal ah oo nuuciisa uu ahaa Miinada dhulka lagu aaso ayaa Gaari Cabdi Bille ah oo ay wateen Ciidamada PIS-ta Puntland waxaa lagula eegtay duleedka magalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Gaariga Qaraxa lala eegtay ayaa wuxuu la socday Kolonyo Gawaari ah oo isugu jirtay ciidamo Maraykan ah iyo kuwa la dagaalanka waxa loogu yeero Argagixisada ee PIS-ta Puntland, waxaana xilliga Qaraxa lala beegsanayay ay marayeen nawaaxiga degaanka Galgala.
Afhayeen u hadlay ururka Al-shabaab ayaa sheegay qaraxan in ay ka dambeeyaan rag ka tiran Shabaab, gaar ahaan kuwa ku sugan degaanada Puntland, waxaana uu tilmaamay Qaraxaasi in ay ku dileen saraakiil iyo Ciidamo ka tirsanaa Puntland.
Wuxuu kaloo sheegay dadka halkaasi ku dhintay inuu ka mid ahaa Taliyihii Howgallada PIS-ta Puntland oo lagu magacaabi jiray Korneyl Galayr Xassan Yuusuf iyo sarkaal kale oo magaciisa lagu soo koobay Barkhad.
Shabaab ayaa kordhiyay Qaraxyada ay la beegsadaan Ciidamada Puntland, kadib markii isbuucii la soo dhaafay ay Qarax Miino oo ka dhacay duleedka Boosaaso ku dileen Taliyihii ciidamada Miina baarista Puntland Korneyl Cusmaan Kalabeyr.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la sii daayay